Mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho oo ballan qaad fiican u sameysay haweeneydii afarta caruur dhashay. - Caasimada Online
Home Warar Mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho oo ballan qaad fiican u sameysay...
Mid ka mid ah shirkadaha Muqdisho oo ballan qaad fiican u sameysay haweeneydii afarta caruur dhashay.
Iyadoo dhawaan hooyo Soomaaliyeed Magaalada Muqdisho ay ku dhashay caruur mataano ah oo gaarayaa ilaa afar hal kamid ahna uu geeriyooday ayaa Hooyadaasi Soomaaliyeed waxa ay heshay gurmad kala duwan.
Masuuliyiin ka socotay Shirkada Hormuud oo maanta gaaray halka ay ku nooshahay hooyadani ayaa waxa ay sheegeen inay la socon doonaan xaalada ay ku nooshahay haweeneydaasi muddo dhan labo sano. Cali Sheekh Yaasiin Cali Fadhaa oo kamid ah xubnaha Shirkada Isgaarsiinta Hormuud oo saxaafada kula hadlay guriga ay dagan tahay haweeneyda ayaa wuxuu sheegay in muddo labo sano hada kadib ah ay balan qaadayaan nolosha haweeneydaasi.
Wuxuu sheegay Cali Fadhaa in Xaalada caafimaad iyo mida dhaqaale intaba ay la soconayaan hadii ay yihiin Shirkada Hormuud isaga oo baaq ujeediyay ganacsatada Soomaaliyeed kaasi oo ugu baaqay inay caawiyaan hooyadani Soomaaliyeed.
Maamo Xaliimo Maxamed Cabdi oo iyadana goobtaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay sida Shirkada Hormuud ay udamaanad qaaday la socodka xaaladeeda muddo labo sano ah ee hada soo socota mahadnaqna ujeedisay.
Maalmo kahor ayeey aheyd markii deeq kala duwan la gaarsiiyay hooyadani Soomaaliyeed ee dhawaan afarta caruurta ah ku dhashay Muqdisho halka mid kamid ah caruurtana uu geeriyooday.